China Fitaovana fikosoham-bary, kojakoja fikosoham-bary
Vary fanodinana pneumatika
Ny fikosoham-bary pneumatic dia milina fitotoam-bary tsara indrindra hanodinana katsaka, varimbazaha, varimbazaha durum, rai, orza, soba, sorghum ary malt.
Ny fikosoham-bary elektrika dia milina fitotoam-bary tsara indrindra hanodinana katsaka, varimbazaha, varimbazaha durum, rai, orza, soba, sorghum ary malt.
Amin'ny maha milina fanasiana lafarinina premium, ny planiftert dia mety ho an'ireo mpanamboatra lafarinina izay manodina varimbazaha, vary, varimbazaha durum, rai, oat, katsaka, buckwheat, sns.
Mpanaparitaka bibikely fikosoham-bary
Mpanaparitaka bibikely fitaovana fikosoham-bary ampiharina betsaka amin'ny famoloana lafarinina maoderina mba hampitomboana ny fitrandrahana lafarinina sy ny fikosoham-bary.
Ny mpamitaka ny vokatr'izany dia novokarina araky ny endriny mandroso. Ny milina fanodinana mandroso sy ny teknika dia nanome antoka ny marin-toetra ilaina sy ny kalitaon'ny vokatra.
Mpanamboatra lafarinina kely Plansifter ho an'ny sivana.
Misy ny famolavolana efitrano malalaka sy mihidy, Mba hanasivana sy hanasokajiana ireo fitaovana arakaraka ny haben'ny sombintsombiny, Ampiasaina betsaka amin'ny fikosoham-bary, fikosoham-bary, fikosoham-bary, ampiasaina koa amin'ny indostria simika, ara-pahasalamana ary hafa
Plansifter momba ny mono-section
Mono-Section Plansifter dia manana firafitra mifangaro, lanja maivana ary fametrahana mora sy fomba fiasa mihazakazaka. Izy io dia azo ampahafantarina betsaka amin'ny fikosoham-bary maoderina ho an'ny varimbazaha, katsaka, sakafo ary na zavatra simika aza.
Mpanamboatra fizarana kambana
Ny planifter an'ny faritra kambana dia karazana fitaovana fikosoham-bary. Ampiasaina indrindra amin'ny sivana farany eo amin'ny sivana amin'ny alàlan'ny planifter sy ny lafarinina famonosana ao amin'ny fararano, ary koa ny fanasokajiana ireo akora pulverulent, ny lafarinina varimbazaha madinidinika, ary ireo fitaovana grinded intermédiat.
Fitaovana fikosoham-bary - mpanadio
Ny mpanadio koba totoina ampiharina betsaka amin'ny famotoana lafarina ankehitriny hamokarana lafarinina misy kalitao avo lenta. Nampiasaina tamin'ny fomba mahomby mba hamokarana lafarinina semolina amin'ny farine durum.
Amin'ny maha milina fikosoham-bary antsika, ny fikosoham-pirinty ataon'ny SFSP dia afaka mamotika karazan-java-maitso maro karazana toy ny katsaka, sorghum, varimbazaha, tsaramaso, mofomamy vita amin'ny soja, sns. Mety amin'ny indostria toy ny famokarana vilona sy ny famokarana vovoka fanafody.
Ny vita amin'ny bran dia azo ampiasaina ho toy ny dingana farany amin'ny fitsaboana ny bran tafasaraka amin'ny faran'ny tsipika famokarana, mampihena bebe kokoa ny atin'ny lafarinina ao anaty bran. Ny vokatray dia misy habeny kely, avo lenta, fanjifana angovo ambany, fiasan'ny mpampiasa, fandaminana mora, ary fahombiazana azo antoka.
YYPYFP Series Pneumatika Roller Mill
YYPYFP series pneumatic roller mill dia miorina amin'ny heriny avo, fampisehoana marin-toerana ary feo ambany, mora ny fikojakojana sy ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany.